ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : ထားဝယ်မြို့နယ်အဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် ဟောပြောခဲ့သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ မိန့်ခွန်း
ထားဝယ်မြို့နယ်အဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် ဟောပြောခဲ့သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ မိန့်ခွန်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ နှင့် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
သည် ဇန်န၀ါရီ ၂၉ ရက် နံနက် ၈ နာရီကျော်ခန့်မှာ တင်္နသာရီတိုင်း၊ ထားဝယ်. လောင်းလုံ. နှင့်
ရေဖြူမြို့များသို့ ပါတီ စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်အဖြစ် ထားဝယ်လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာသည်။ ပတ်
၀န်းကျင်ဒေသအသီးသီမှ လေဆိပ်မှာကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သူ အလွန်များပြားလှပြီး “အမေစု ကျန်း
မာပါစေ… အောင်မြင်ပါစေ” ဆိုသော ဆုတောင်းသံများကို ကြားခဲ့ရပြီး NLD အလံငယ်တွေဟာ
လေဆိပ်မှသည် တစ်မြို့လုံး ရဲရဲတောက်လျှက်ရှိသည်။ ဒေသခံတစ်သောင်းဝန်းကျင်ခန့် နှင့်
လမ်းတစ်လျှောက် လမ်းဘေးဝဲယာတစ်လျှောက် NLD အလံများကိုင်ဆောင် ကြိုဆိုကြသူ ပြည်
သူများကို အမိုးဖွင့်ကားပေါ်မှ လက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီး ထားဝယ်မြို့နယ်အဖွဲ့ချုပ်ရုံးသို့ရောက်ရှိချိန်
တွင် ယခုမိန့်ခွန်းအား ပြောကြားခဲ့သည်။
by Ko MawPyay on Tuesday, November 27, 2012 at 7:33pm ·